Ndandingafuni Ukufa! | Indlela Umama Ofikisayo Awabutshintsha Ngayo Ubomi Bakhe
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMizo IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
Kubalisa uYvonne Quarrie
UNYAKA WOKUZALWA: 1964
UBOMI BANGAPHAMBILI: UMAMA OFIKISAYO OWAYENGALAWULEKI
Ndazalelwa ePaddington, apho kunyakazela abantu, eLondon, eNgilani. Ndandihlala nomama kunye noosisi bam abathathu. Utata wayemana esishiya ngenxa yengxaki awayenayo yotywala.
Xa ndandisengumntwana, umama wandifundisa ukuba ndithandaze qho xa ndiza kulala. NdandineBhayibhile eneeNdumiso kuphela, ngoko ndazenzela iingoma endiza kuzicula. Ndikhumbula ndifunda kwenye incwadi amazwi awahlala ehleli engqondweni, athi: “Ngeny’ imini uza kufa.” Loo mazwi andenza ndaphuthelwa ebusuku ndicinga ngengomso. Ndandisithi: ‘Ngokuqinisekileyo ubomi abuphelelanga apha. Kutheni ndilapha?’ Ndandingafuni ukufa!
Ndaba nomdla kakhulu kubugqi. Ndaqalisa ukuthetha nabafi, ndisiya emangcwabeni neetshomi endifunda nazo, futhi sibukela iimuvi ezoyikekayo. Sasisithi zimnandi kodwa ziyoyikisa.
Xa ndandineminyaka elishumi ndaqalisa ukungalawuleki. Ndatshaya ndaza ndalikhoboka lecuba. Ekuhambeni kwexesha ndatshaya intsangu. Ndathi ndifika kwiminyaka eyi-11, ndabe sendisela nokusela. Nangona ndandingayithandi incasa yotywala, ndandizithandela nj’ ukunxila. Ndandithanda umculo nokujayiva. Ndandihamba iipati nemijuxuzo yasebusuku. Ndandidla ngokuzimela ebusuku ndibuye ekuseni kakhulu, sendichwechwa. Ndandisiya esikolweni ndidiniwe, ngoko ndandidla ngokuqhwesha. Xa ndiye ndahlala imini yonke, ndandisithi laqa utywala qho kuza kuqalisa esinye isifundo.
Ndazitshona iimviwo zokuphela konyaka. Umama wadana futhi wacaphuka. Kaloku, wayengazi ukuba ndiphila obu bomi. Saxabana kakhulu, ndemka ekhaya. Ndaya kuhlala nomfana endandithandana naye nowayeliRasta, uTony. Wayeqhekeza, ethengisa iziyobisi, esaziwa nangokuba ndlongondlongo. Kungekudala ndakhulelwa ndaza ndazala umntwana oyinkwenkwe ndineminyaka eyi-16.
Ndadibana namaNgqina KaYehova xa ndandihlala kwikhaya loomama abangatshatanga. Ndandinegumbi endandilinikwe ngabaphathi balapho. Abanye oomama abaselula babesoloko befikelwa ngamaNgqina amabini abhinqileyo. Ngenye imini nam ndaya kumamela. Ndandizimisele ukuwaphikisa. Yonke imibuzo yam ayiphendula ezolile nangokucacileyo ngeBhayibhile. Ayenobubele, nto leyo eyabangela ukuba ndiwathande. Ndavuma ukuba andifundele iBhayibhile.
Kungabanga thuba lide iBhayibhile yandifundisa into eyabutshintshayo ubomi bam. Ndakhula ndikoyika ukufa. Ngoku ndifunda ngovuko awayefundisa ngalo uYesu! (Yohane 5:28, 29) Enye into endayifundayo kukuba uThixo undikhathalele. (1 Petros 5:7) Ndawathanda kakhulu amazwi akuYeremiya 29:11, athi: “‘Kuba mna ndizazi kakuhle iingcamango endizicingayo ngani,’ utsho uYehova, ‘iingcamango zoxolo, kungekhona ezentlekele, ukuba ndininike ikamva nethemba.’” Ndaqalisa ngoko ukukholelwa ekubeni ndinokuba nethemba lokuphila ngonaphakade kwiParadesi esemhlabeni.—INdumiso 37:29.
AmaNgqina KaYehova andithanda ngokusuk’ ezintliziyweni. Xa ndandiqala ukuya kwiintlanganiso zawo, andamkela ngobubele! (Yohane 13:34, 35) Zange ndabufumana obunjalo kwicawa endandiyihamba. Wona andamkela nangona ndingulo mntu ndinguye. Azipha ixesha lokundihoya, aza andipha amacebiso anokundinceda. Nam ndaziva ndingowale ntsapho inkulu ithanda abantu.
Ukufunda kwam iBhayibhile kwandenza ndabona ukuba kuza kufuneka nditshintshe indlela endiphila ngayo ndize ndiphile ngendlela efunwa nguThixo. Zange kube lula ukuyeka ukutshaya. Kwakhona, ndabona ukuba omnye umculo endinawo undenza ndinqanqathekele intsangu, ngoko ndawutshintsha umculo endiwumamelayo. Ekubeni ndandifuna ukuhlala ndisezingqondweni, ndayeka ukuya kwiipati nemijuxuzo yasebusuku kuba ndandiye ndirhalele ukunxila. Ndazenzela iitshomi ezintsha ezaziza kundikhuthaza ukuba ndiphile obu bomi ndibufunayo.—IMizekeliso 13:20.
Ngelo xesha, noTony wayefundelwa iBhayibhile ngamaNgqina kaYehova. Ekubeni ayeyiphendula ngeBhayibhile imibuzo yakhe, naye waqiniseka ukuba yinyaniso le ayifundayo. Wayitshintsha indlela awayephila ngayo: waziyeka iitshomi ezindlongondlongo nokuqhekeza, wayeka nokutshaya intsangu. Ukuze senze zonke izinto ezifunwa nguYehova, sabona ukuba masitshintshe indlela embi esiphila ngayo ukuze umntwana wethu akhulele kwikhaya elizinzileyo. Ngo-1982 satshata.
“Andisaphuthelwa ebusuku ndicinga ngengomso okanye ngokufa”
Ndikhumbula ndikhangela amanqaku kwiMboniselo noVukani! * abalisa ngabantu ababephila njengam baza batshintsha. Yandikhuthaza kakhulu indlela abenza ngayo! Ndazimisela ukuqhubeka ndizama ndingatyhafi. Ndandisoloko ndimcela uYehova ukuba angandincami. Mna noTony sabhaptizwa ngoJulayi 1982.
Ukuba ngumhlobo kaYehova uThixo kwabusindisa ubomi bam. Mna noTony uye wasixhasa ngamaxesha anzima. Ngaloo maxesha anzima, siye sathembela kuye kwaye siyabona ukuba usoloko enathi.—INdumiso 55:22.
Ndiye ndakuvuyela ukunceda abantwana bethu bamazi uYehova njengam. Ngoku ndivuyiswa kukubona nabazukulwana bam besiya bemazi ngakumbi uThixo.
Andisaphuthelwa ebusuku ndicinga ngengomso okanye ngokufa. Veki nganye mna noTony sihambela amabandla amaNgqina kaYehova ukuze sikhuthaze abantu bakaThixo. Sihamba nabo xa besiya kufundisa abanye ukuba, xa benokholo kuYesu, nabo banokuphila ngonaphakade.
^ isiqe. 17 Zipapashwa ngamaNgqina KaYehova.